Ezona ncwadi zintle zika-2017 ongazukuyeka ukufunda | Uncwadi lwangoku
Ukuphela konyaka kuyasondela, kwaye ke lixesha lokuba sibalise onke amaxesha esiye sahlangabezana nawo, uncumo esilunikezayo, kwaye, ewe, nezo ncwadi zintsha zifikileyo ukuze sandise iivenkile zethu zeencwadi. Unyaka uzinzile kwezi ezona ncwadi zilungileyo zika-2017 leyo inokuba yindlela elungileyo yokuqala i-2018 elandelayo phakathi kwamabali amahle.
1 Izigulana zikaGarcía kaGqirha: Iziqendu zemfazwe engapheliyo, ngu-Almudena Grandes
2 4 3 2 1, nguPaul Auster
3 Inkosi yezithunzi, nguJavier Cercas
4 Ukunikezela, nguRay Loriga
5 INtsika yoMlilo nguKen Follett
6 Umlilo ongabonakaliyo, nguJavier Serra
7 Ingenakoyiswa, ngu @srtabebi
8 Intiyo Oyinikayo, nguAngie Thomas
9 UMphathiswa woLonwabo oluPhakamileyo, nguArundhati Roy
10 UBerta Isla, nguJavier Marías
Izigulana zikaGarcía kaGqirha: Iziqendu zemfazwe engapheliyo, ngu-Almudena Grandes
Ngaphandle kokungena ngaphakathi kwimisebenzi yakhe kwiminyaka yakhe yokugqibela, uAlmudena Grandes ugxile ekumqhubeleni phambili uthotho lweencwadi kwithuba lasemva kwemfazwe ezibandakanyiweyo ngu-Inés kunye novuyo, umfundi kaJules Verne, imitshato emithathu kaManolita kwaye, kutshanje, abaguli bakaGqirha García, Inqaku lobugqwetha elinxibelelanisa iyelenqe leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kunye nasemva kwemfazwe eSpain ezinze eMadrid, ngakumbi ubukho bombutho ofihlakeleyo wababaleki abasuka kwiRich Reich apho abahlobo ababini bakudala beMfazwe yamakhaya bazakuzama khona Ngena.
4 3 2 1, nguPaul Auster
Emva kweminyaka esixhenxe yokuthula, uAuster ubuyile kulo nyaka ephethe incwadi entsha phantsi kwengalo yakhe. Ukhenketho lwe imvelaphi yobuhlanga yase-United States yesiqingatha sesibini senkulungwane yamashumi amabini ngamehlo kaFerguson, umfana oselula ohlangabezana neemvakalelo kunye neemvakalelo zobomi obahlukeneyo. Uhambo olusifaka kwiindlela ezahlukeneyo zothando, isizungu okanye uluntu olujongwa kumlinganiswa omnye. Umlutha kwaye womelele, i-4 3 2 1 iqinisekisa amandla ka-Auster okukusa emhlabeni wakhe kwaye akwenze ukuba ujonge ukusuka kwibali ukuya ebalini ngaphandle kwesaziso. Enye yeencwadi ezilungileyo zango-2017.
Inkosi yezithunzi, nguJavier Cercas
Inoveli yokugqibela kaJavier Cercas yeyona inomdla kumbhali ngezizathu ezininzi, ngakumbi kuba ithetha ngotatomkhulu wombhali, uManuel Mena, othathelwa ingqalelo njenge-Falangist kwaye ngubani wasweleka eneminyaka eyi-17 ngexesha lemfazwe yamakhaya yaseSpain. Ibali elixolelanisa uCerca nexesha elidlulileyo awayeneentloni ngalo ngaphambi kokuba aqale kwaye ayisiyiyo nje kuphela ingxelo ekhohlakeleyo yomlo, kodwa kunye neliso lenkunzi yenkomo kuloyiko lwangaphakathi lombhali ngokwakhe.
Ukunikezela, nguRay Loriga
Elinye lamagama amakhulu abizwa ngokuba Ubunyani obungcolileyo baseSpain, URay Loriga, ubuyile kulo nyaka ephethe incwadi entsha, Surrender, yona ophumeleleyo kwi-Alfaguara Novel Prize 2017. Umsebenzi apho uLoriga asibhaptiza khona kwihlabathi ezimbini, enye iyinyani kwaye enye yintsomi ekhutshwe sisiXeko esiNgafihliyo, ikhonkco laso eliqhelekileyo ngumbono wemfazwe ovela phesheya. Imbambano ihlanjululwe ngokukhohlisa kunye nentlungu efunyanwa ngutata ohamba kunye nenkosikazi yakhe nonyana, uJulio omncinci.
INtsika yoMlilo nguKen Follett
Ngaphezulu kwe Iincwadi ezizizigidi ezingama-150 zithengisiwe, UKen Follett lelinye lawona magama aphambili kumthengisi othengisa kakhulu wexesha lethu, ukuba yiNtsika yoMlilo incwadi yokugqibela epapashwe ngumbhali waseBritane. Ufakelo lwesithathu lwe-saga eyaziwayo yeNtsika yoMhlaba ebalisa ngokubuyela ekhaya kukaNed Willard oselula, ngexesha apho iKingsbrral Cathedral eyaziwayo yabona isizathu esenze ukuba yonke iYurophu ijongane neNgilane: ukubekwa etroneni kukaElizabeth I, owalayo ukushiya itrone iqhubeka ngokungapheliyo kwamacebo okuthintela nakuphi na ukuhlaselwa. okanye uvukelo kuye.
Umlilo ongabonakaliyo, nguJavier Serra
Uthathwa njengomnye wababali ababalaseleyo kwilizwe lethu, uSerra uphumelele i Imbasa yePlanethi 2017 Enkosi ngomsebenzi wakhe wamva nje, opapashwe ngo-Novemba ophelileyo. Ukulandela emva kwezo ncwadi bezisoloko zizama ukunika iimpendulo kwiimfihlakalo uluntu olungazifumaniyo izigqibo, Umlilo ongabonakaliyo unika uDavid Salas, ingcali yeelwimi yaseTrinity College eDublin oza kuphanda ubudlelwane phakathi kweGrail eNgcwele kunye ISpain emva kokuduka komnye wabafundi bomhlobo wakhe wakudala, uLady Goodman. Enye yeencwadi kule Krismesi, ngaphandle kwamathandabuzo.
Ingenakoyiswa, ngu @srtabebi
Uncwadi lube notshintsho olukhulu kule minyaka idlulileyo ngenxa yamandla zokunxibelelana. la microliterature, okanye amandla wombhali ukufikelela kubafundi bexesha elizayo ngeendlela ezintsha nezintsha zokubonisa sele ziyinyani, kwaye omnye wemizekelo ebalaseleyo yimpumelelo ye-Indomable, incwadi ka @srtabebi ekhulelwe yile blonde kunye nobufazi eyavela kwi-Instagram njenge "isiqhushumbisi."
Intiyo Oyinikayo, nguAngie Thomas
Emva kwesenzeko Imiba ebomnyama Ukuchukunyiswa kukuzimisela kukaDonald Trump kubongameli baseMelika, Intiyo Oyinikayo iza ngexesha elifanelekileyo lokucinga ngemeko yobuhlanga eUnited States. Iyimfuneko kwaye inzima, incwadi ka-Angie Thomas ibhekisa kudubulo oluya kuhlala luphawula ubomi buka-Starr, umfazi omnyama omnyama ohlala phakathi komjikelo wakhe kunye nesikolo samabanga aphakamileyo kwindawo emhlophe. Enye yeencwadi eziphumelele kakhulu zonyaka kwelinye icala leAtlantic kwaye kufuneka kufundwe kula maxesha enkathazo.
UMphathiswa woLonwabo oluPhakamileyo, nguArundhati Roy
Iminyaka engamashumi amabini emva koThixo wezinto ezincinci, Incwadi eyamazisa kwihlabathi, eyathengisa izigidi zeekopi kwaye yaphumelela iBhuku leNcwadi ngo-1997, i-Indian Arundhati Roy yayibuya kulo nyaka inebali elitsha. Ubulungiseleli bolonwabo oluphezulu buthetha ngaye wonke umntu, yonke into; Umzobo wabalinganiswa ekuthiwa u-Anyum, owayekade ebizwa ngokuba yi-Aftab, abe lilungu "lesini lesithathu" eliqwalaselweyo nelisekwe emangcwabeni kunye nabanye abalinganiswa abachaza i-India eyimfihlakalo nengalinganiyo echazwe ngaphandle kokulingana ababalisi ababalaseleyo baseAsia bexesha lethu.
UBerta Isla, nguJavier Marías
Naluphi na usuku olunikiweyo, usuku "olusisiyatha", luya kulungisa ubomi bakho bonke. Esi sisiseko sencwadi yokugqibela nenamandla ye- Umbhali weNtliziyo emhlophe kangako. Inoveli ethetha ngebali lothando lukaBerta Isla kunye noTomás Nevinson lisikiwe xa iNkosana ijonge kuTomás, indoda eneziphiwo zokubonisa, ibona inguquko eguqula ngonaphakade ubudlelwane bayo nenkosikazi yayo.
Zeziphi ezona ncwadi zibalaseleyo zika-2017 zakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezona ncwadi zintle zika-2017 ongazukukwazi ukuyeka ukuzifunda
URODRIGO SEVILLA COBO sitsho
Izigulana zikaGqirha Garcia, incwadi elungileyo ebhalwe ngu-Almudena Grandes, kodwa uyadlula kakhulu kwisibini kwisithathu sencwadi kwaye uphulukana nomdla kancinci. Ndiyakuvuyela umbhali.
Phendula kwiRODRIGO SEVILLA COBO
2017. Ibhalansi yam emnyama yeeYankees, iiVikings, amaTaliyane, amaGauls kunye nabemi